Korneyl C/raxmaan Cabdi Dhimbil, Waan ka tashan doonaa Ciidamada Itoobiya ee aan Amisom ka tirsanayn – STAR FM SOMALIA
Taliyaha Qaybta Afaraad Ee Ciidanka Midowga Afrika, Korneyl C/raxmaan Cabdi Dhimbil, ayaa qiray in qaar ka mid ah Ciidamada Itoobiya ee ku sugan Somaliya, aynaan ka tirsanayn Hawlgalka Midowga Afrika Ee Amisom.
Taliyaha oo ku sugan Gobolka Hiiraan, ayaa cadeeyay in Xoogaga Itoobiya ay qaarkood jooggaan Gobolka Hiiraan, xilli sida uu sheegay aysan ka tirsanayn Ciidanka Nabad Ilaalinta Midowga Afrika.
Taliyaha wuxuu sheegay Ciidamadaasi inaysan ka amar qaadan Taliska Amisom oo waxay amarka ka helaan buu yiri Addis Ababa, isagoo afka ku ballaariyay inay ku socdaan barnaamij laga soo siiyay Addis Ababa.
Haddii Ciidamada Itoobiya ay caawinayan Amisom ay tahay sida uu yiri wax wanaagsan, haddii barnamij kale ay u socdaana looga baahan yahay Dowladda Somaliya inay qeexdo doorka Ciidamada Itoobiya ee Somaliya, sida uu yiri.
Waxa uu soo hadalqaaday Ciidamadii Itoobiya ee aroornimadii hore ee Axadii isaga baxay Deegaanka Halgan Ee Gobolka Hiiraan, isagoona bidhaamiyay inaanay qayb ka ahayn Xoogaga Midowga Afrika.
Waxa sidoo kale uu sheegay in Saraakiisha Itoobiya ay habeen hore oo dhan isku daaleen, si aynaan kaga bixin Deegaanka Halgan, ha yeeshee aynaan ahayn askar ku shaqaysa amarka Amisom, balse ku shaqeeya awaamiirta Addis Ababa.
Korneyl C/raxmaan Cabdi Dhimbil oo la hadlay Laanta afka Somaliga ee VOA, ayaa sheegay in hadda ka dib ay ka tashan doonaan Ciidamada Itoobiya, isla-markaana ay Ciidamada Jabuuti taggi doonaan Deegaanka Halgan, ayna isku furi doonaan wadada dhirirsan ee xiriirisa Baladweyne iyo Buulo Burde.
Korneyl Dhimbil, ayaa ku waramaaya inay u xayiran yihiin qalab militari oo ay suggayan, marka ay gacantoodu ku soo dhacdana ay u qalab qaadan doonaan Deegaankaasi Halgan, oo Axadii ay dib ula wareegen Xoogaga Shabaabka.
Hadalka ka soo yeeray Sarkaalka Reer Jabuuti, ayaa wuxuu ku soo aadayaa, sida Ciidanka Itoobiya aynaan daacadda kaga ahayn la dagaalanka Ururka Al Shabaab iyo gacan siinta Dowladda Somaliya.